Tiketi ICE ụgbọ oloko dị ọnụ ala na ọnụ ahịa njem njem | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Tiketi ICE ụgbọ oloko dị ọnụ ala na ọnụ ahịa njem njem
Tọ flagship ICE ụgbọ oloko nke German ụgbọ okporo ígwè usoro ejikọ obodo ọ bụla n'ime Germany.
Intercity-Express ma ọ bụ na ya shortcut aha ICE bụ usoro nke elu-ọsọ ụgbọ oloko nke ndi Deutsche Bahn nwere, Ndị na-enye ụgbọ okporo ígwè mba Germany. Nke ICE ụgbọ oloko eji mara okomoko, ọsọ, na nkasi obi ka ha na - ejikọ obodo niile na Germany.
Nọmba 1: Detuo tiketi ICE gị tupu oge ị nwere ike
Nọmba 2: Tụ gị ICE ụgbọ okporo ígwè tiketi mgbe ị bụ ụfọdụ nke gị njegasi
Ijide n'aka na njem gị na ụbọchị ọpụpụ ga-azọpụta gị ego na nkwụghachi ụgwọ. Ọnụego nke nkwụghachi na nhọrọ maka ịlaghachi tiketi ICE anaghị eji ọzọ dabere n'ụdị tiketi ị zụrụ. Ọzọkwa, nkwụghachi ụgwọ dị ala maka tiketi nchekwa ego karịa maka tiketi ụgbọ ala ọkọlọtọ. Mara na DB agaghị akwụghachi gị ego mgbe ị laghachiri tiketi gị. A na-akwụghachi nkwụghachi DB site na akwụkwọ ego DB, nke ị nwere ike iji kwụọ ụgwọ maka ọrụ ọ bụla ha na-enye. I nwekwara ike ree gi ICE ụgbọ oloko tiketi na ntanetị n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ego ahụ.
Nọmba 3: Njem site na ICE ụgbọ oloko n'oge oge kachasị elu
Tiketi ICE dị ọnụ ala karịa n'oge oge kachasị elu (Tuzdee, Wenezde anwụ Wenezde, Wenezdee, na Satọde). N'oge elu ụbọchị, ọnụ ala tiketi na-ere ngwa ngwa, na-ahapụ naanị tiketi Flexpreis. Travelga njem na ụbọchị Peak, were akwụkwọ iji nweta tiketi ụgbọ elu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta tiketi ụgbọ elu saver, ijide n'aka na ị ga-eme njem n’isi ụtụtụ na n’isi ehihie (n'ihi ndi njem njem) dị ka Flexpreis tiketi ga-adị ọnụ ala karịa mgbe ahụ. Egbu, zere njem ọhaneze na ezumike ụlọ akwụkwọ ka ọnụ ahịa tiketi ICE ga-abawanye.
Nọmba 4: Zụta tiketi gị nke ICE na Save A Train
Ga-ahụ onyinye kacha mma nke ICE gbaa ụgbọ oloko na Europe na weebụsaịtị anyị, Chekwa ụgbọ oloko. Anyị nwere onyinye kachasị ukwuu nke tiketi ụgbọ elu na Europe na ụwa. Na njikọ anyị na ọtụtụ ndị na-arụ ụgbọ okporo ígwè na algọridim ziri ezi, anyị na-enye gị tiketi ICE kacha ọnụ ala ị nwere ike ịchọta. Ọzọkwa, anyị na-ahụ ụzọ ọzọ dị ọnụ ala maka ụgbọ oloko na-abụghị ICE.
Pricegwọ nke tiketi ICE na-adabere n'ụdị tiketi na klas nke oche ịchọrọ. n'ozuzu, German ụgbọ okporo ígwè bu ama maka ya ala ICE tiketi ahịa. E nwere ụdị tiketi atọ maka ụgbọ oloko ice - ọkọlọtọ ma ọ bụ tiketi Flexpreis, ụgbọ elu Supersaver ma ọ bụ Supersparpreis, na ego nchekwa ego ma ọ bụ tiketi Sparpreis ICE. Tiketi ego ụgbọ a na-echekwa dị ọnụ ala karịa tiketi ọkọlọtọ, mana tiketi dịnụ belata ka ụbọchị ọpụpụ na-abịaru nso. ICE tiketi dabere na klaasị ị họọrọ na ebe a bụ okpokoro nchịkọta nke ọnụahịa nkezi maka klaasị ọ bụla:
3) Insgbọ oloko na-eme ka gburugburu ebe obibi. Nke ICE ụgbọ oloko dịkwa nwekwuo gburugburu ebe obibi karịa ụgbọ elu, nke na-eso enye mmetọ ikuku. Ejegharị n'ụgbọ okporo ígwè bụ 20 carbon obere ikuku carbon emission karịa njem site na ikuku.
Dị ka ọ na-echebara tiketi na ngalaba klas dị na ụgbọ oloko ụgbọ mmiri, ụdị tiketi ọ bụla nwere ike ịdị na klaasị mbụ. Nke a pụtara na ọbụna ọnụ ala ICE ụgbọ okporo ígwè, ọnụ ahịa nchekwa, na Super sparpreis nwere ike ị nweta oche oche mbụ. Otú ọ dị, ọnụahịa ahụ dịgasị iche maka klaasị abụọ a, dika ahuru n’elu.
ICE klas nke mbụ na-esetịpụ ụkpụrụ maka okomoko, nkasi obi, na ọrụ kachasị mma na usoro ụgbọ okporo ígwè German. Ezubere maka ụgbọ elu ndị iro, Tragbọ oloko ICE na-enye nkasi obi maka njem ogologo oge. Ọzọkwa, ngalaba nke izizi mejupụtara ihe dịka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ụgbọ oloko ahụ ma ọ nwere ike ịbụ iberibe atọ dabere na ụgbọ oloko ICE.
Ọrụ ndị ọzọ dị iche na klas nke mbụ na klas nke abụọ na ụgbọ oloko ICE gụnyere n'efu, akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị, free na-akparaghị ókè WI-FI, na ihe pụrụ iche iji gbochie nkwụsịtụ n'ikuku ekwentị. Ndị njem Klas mbụ nwekwara ike ịtụ nri ha site na oche ha ma ọ bụrụ na ha achọghị ịga ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ n'ụgbọ okporo ígwè.
Ngalaba klas nke abụọ adịghị anya site na klas nke mbụ na nkasi obi. Na mgbakwunye, oche ndị dị na klas nke abụọ dị mma karịa oche oche ụgbọ elu. gbakwunyere, ha bụ ergonomic, bia na headrest, kpuchie ya na akwa eji. Nke a na-eme njem dị anya nke ọma.
E nwere ọtụtụ klas nke abụọ site na ụgbọ okporo ígwè ICE karịa ndị klas mbụ. karịsịa, ndokwa oche nke abụọ bụ nke siri ike karịa nke ngalaba nke klas mbụ. Enwere oche anọ n’usoro ọ bụla (2-2 ndokwa oche), ya na oche abụọ n’agbanyere aka n’etiti.
Ọzọkwa, ndị njem nọ na klas nke abụọ nwere ike ịnweta ụfọdụ ọrụ na klaasị mbụ mana yana oke. Were WI-FI dịka ọmụmaatụ. Na klas nke abụọ, Wi-Fi abụghị ihe akparaghị ókè dịka ọ dị maka ndị njem na klas nke mbụ. Ndị njem nke abụọ anaghị enwe ohere ịnweta akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị n'efu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta akwụkwọ akụkọ na klas nke abụọ, to ga-azụta otu.
Ndị njem nke abụọ ga-aga ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịtụ nri. Ha enweghị ike ịtụ ahịa site n'oche ha dịka ọ dị na mpaghara klas mbụ nke ICE. Ọzọkwa, ICE tiketi nke abụọ na Flexpreis na ego nchekwa adịghị ekpuchi ndozi oche. Ọ bụrụ na ịchọrọ idobe oche na klas nke abụọ, ’kwesiri ịkwụghachi nchikota nke € 6. N'otu aka ahụ ma ndị njem klas mbụ na ndị njem nke abụọ nwere akara eletrik na oche ọ bụla.
Ice awade okporo ígwè ngafe na ọnụ ala ICE Zụọ ahịa ahịa maka njem akparaghị ókè na Germany ma ọ bụ Europe. Enwere ụzọ ụzọ ụgbọ oloko atọ:
Ego na ICE ụgbọ oloko tiketi maka ma nwata ma okenye.
Iji hụ na ị rutere n’oge ịbanye, dajụọ, na ọbụna na-achọgharị ụlọ ahịa, dụrụ gị ọdụ ka ịbịarịa opekata mpe 30 nkeji oge tupu ọpụpụ gị.
Ice bụ isi na-aga obodo niile dị na Germany. Enwere ụfọdụ mba CEzọ njem ice mba ụfọdụ nke jikọtara Germany.
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-ice%2F%0A%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.